Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka oo wada hadalo la leh masuuliyiinta Talyaaniga – Radio Daljir
Noofember 21, 2018 5:22 b 0
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulamo la leh masuuliyiinta wadanka Talyaaniga, waxaana shalay uu la kulmay raysal wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte.
Kulank ayaa waxaa looga hadlay xiriirkii hore ee Talyaaniga iyo Soomaaliya iyo waxyaabihii uu ka qabtay dib u dhiska Soomaaliya ee mudadii burburka iyo kaalintii uu ka qaatay shirarkii dib u heshiisiinta ee dowladda faderaalka Soomaaliya lagu soo dhisay.
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u sheegay raysal wasaaraha Talyaaniga in loo baahanyahay dowladda Talyaaniga inay qaadato doorkeedii hore.
“Soomaaliya iyo Talyaaniga waxay wadaagaan xiriir taariikhi ah oo ku qotoma iskaashi dhaqaale, mid dhaqan iyo saxiibtinimo soo martay heerar kala duwan, waana tan udub dhexdaadka u ah in la xoojiyo xiriirkeena soo jireenka ah si aynu horumar iyo barwaaqo u gaarsiinno labadeenna shacab.”ayuu yiri Farmaajo.
Raysal Wasaaraha Talyaaniga ayaa soo dhoweeyey codsiga madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay fulin doonaan codsiga.
Dhanka kalle madaxwayne Farmaajo ayaa maanta la kulmi doona madaxwaynaha Talyaaniga.